ထောက်ကြံ့ စစ်သင်္ချိုင်း - ဝီကီပီးဒီးယား
ထောက်ကြံ့စစ်သင်္ချိုင်း သည် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်း ဗြိတိသျှဓနသဟာယနိုင်ငံများမှ မြန်မာပြည်စစ်ပွဲများအတွင်း သေဆုံးခဲ့သော မဟာမိတ်စစ်သားများကို မြုပ်နှံထားသော စစ်သင်္ချိုင်း ဖြစ်သည်။ ထိုစစ်သင်္ချိုင်းသည် ထောက်ကြံ့မြို့အနီးတွင် တည်ရှိပြီး ရန်ကုန်မြို့မြောက်ဘက် ၂၅ ကီလိုမီတာအကွာ ပြည်လမ်းမပေါ်တွင် တည်ရှိသည်။ ဓနသယာယနိုင်ငံစစ်သင်္ချိုင်းကော်မရှင် (Commonwealth War Graves Commission)မှ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်သည်။
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်း ကျဆုံးခဲ့သော စစ်သား ၆၃၇၄ ယောက်ကို မြုပ်နှံထားသော စစ်သင်္ချိုင်းကြီးဖြစ်ပြီး ထိုအထဲမှ ၅၂ ဦးမှာ ပထမကမ္ဘာစစ်အတွင်း ကျဆုံးခဲ့သော စစ်သားများ ဖြစ်ကြသည်။ အထိမ်းအမှတ်ကျောက်တိုင်တွင် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်း သေဆုံးခဲ့သော ဓနသဟာယနိုင်ငံများမှ စစ်သား ၂၇၀၀၀ ၏ အမည်များကို ရေးထိုးထားသည်။ ထိုသူတိုမှာ ဂူသေချာ သတ်မှတ်နိုင်ခြင်း မရှိကြပေ။ ထိုအထဲတွင် ဂူ ၈၆၇ ခုမှ အမည်များ သေချာသတ်မှတ်နိုင်ခြင်း မရှိသေးပေ။ ထောက်ကြံ့စစ်သင်္ချိုင်းသည် အာရှရှိစစ်သင်္ချုင်းများထဲမှ အလည်အပတ်များသော စစ်သင်္ချိုင်းတစ်ခုလည်း ဖြစ်သည်။
ထောက်ကြံ့စစ်သင်္ချိုင်းကို ၁၉၅၁ ခုနှစ်တွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ မန္တလေးမြို့၊ စစ်တွေမြို့၊ မိတ္ထီလာမြို့ နှင့် ဆားမှော် (Shamaw) တိုက်ပွဲများတွင် ကျဆုံးခဲ့သော စစ်သားများ ကျန်ရှိနေသာ ရုပ်အလောင်းများကို မြုပ်နှံထားပြီး ဂူများကို တိုက်ပွဲများအလိုက် စီထားသည်။ ၂၇၀၀၀ သော နာမည်များစွာရေးထိုးသော ဓနသဟာယစစ်သားများထဲတွင် မြန်မာပြည်တွင် တိုက်ပွဲဝင် သေဆုံးခဲ့သော အိန္ဒိယစစ်သားများနှင့် အာဖရိကစစ်သားများလည်း ပါဝင်သည်။ အိန္ဒိယစစ်သားများအရေအတွက်သည် ၁၈၁၉ ဂူ ရှိသည်။
စစ်သင်္ချိုင်းကို ထိန်းသိမ်းသည့်လုပ်ငန်းအတွက် နိုင်ငံ ၁၃၅ နိုင်ငံမှ ထည့်ဝင်သော ငွေကြေးဖြင့် လည်ပတ်နေခြင်းဖြစ်ကာ ဗြိတိသျှနိုင်ငံသည် ၇ဝ% ဖြင့်အများဆုံးပါဝင်ပြီး ကျန်နိုင်ငံများမှာ အုတ်ဂူအရေအတွက်ဖြင့် အချိုးကျထည့်ဝင်သည်။ ကျန်ရစ်သူ ဆွေမျိုးသားချင်းများ လာရောက်ဂါရဝပြုနိုင်စေရန်နှင့် ဥယျာဉ်၊ သင်္ချိုင်းတစ်ခုထက် သာလွန်သောနေရာတစ်ခုဖြစ်စေရန် ပြုပြင်ထားသည်။
ထောက်ကြံ့စစ်သင်္ချိုင်းတွင် မြုပ်နှံထားသော စစ်သားများထဲတွင် ဗစ်တိုးရီးယားခရော့စ်ဆုတံဆိပ်ရရှိသူ ခုနှစ်ဦးပါဝင်သည်။ Rangoon Memorial တွင် ဗစ်တိုးရီးယားခရော့စ်ဆုတံဆိပ် ရရှိသူ အိန္ဒိယစစ်သားများအပါဝင် နာမည်များစွာကို မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ မြုပ်နှံထားသော စစ်သားများမှာ
Michael Allmand (1923–1944) - ၁၉၄၄ ဇွန်လ ၂၃ ရက်နေ့တွင် မြန်မာပြည်တွင် လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုအတွက်၊
Frank Gerald Blaker (1920–1944) - ၁၉၄၄ ဇူလှိုင်လ ၉ ရက်နေ့တွင် မြန်မာပြည်တွင် လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုအတွက်၊
George Albert Cairns (1913–1944) - ၁၉၄၄ မတ်လ ၁၃ ရက်နေ့တွင် မြန်မာပြည်တွင် လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုအတွက်၊
Charles Ferguson Hoey (1914-1944) - ၁၉၄၄ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၆ ရက်နေ့တွင် မြန်မာပြည်တွင် လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုအတွက်၊
George Arthur Knowland (1922–1945) - ၁၉၄၅ ဇန်နဝါရီလ ၃၁ ရက်နေ့တွင် မြန်မာပြည်တွင် လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုအတွက်၊
Claud Raymond (1923–1945) - ၁၉၄၅ မတ်လ ၂၁ ရက်နေ့တွင် မြန်မာပြည်တွင် လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုအတွက်၊
William Basil Weston (1924–1945) - ၁၉၄၅ မတ်လ ၃ ရက်နေ့တွင် မြန်မာပြည်တွင် လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုအတွက်။
They died for all free men ဟုသော စာသားကို အင်္ဂလိပ်၊ ဟင်ဒီ၊ Urdu၊ Gurmukhi ဘာသာများဖြင့် Rangoon Memorial တွင်ရေးထိုးထားသည်။ ထောက်ကြံ့အောက်မေ့ဖွယ်စစ်သင်္ချိုင်းသည် သူတို့၏ ယုံကြည်ချက်အရ စစ်သား ၁၀၀၀ ကျော်ကို မြုပ်နှံခဲ့သော နေရာလည်းဖြစ်သည်။ 
↑ Cemetery Details. Commonwealth War Graves Commission.
↑ Australian War Graves Photographic Archive။ 28 April 2008 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 18 June 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "စစ်နဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ပြောပြနေတဲ့ ဓနသဟာယစစ်သင်္ချိုင်းတွေ"၊ ကမာရွတ်မီဒီယာ၊ 8 July 2015။ ၈ ဇူလိုင် ၂၀၁၅ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on4March 2016။
↑ VC Burials World-Wide – Burma
↑ Famous names: Taukkyan War Cemetery at FindaGrave
↑ BBC – WW2 People's War – A Highland Chindit။ 22 July 2012 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 20 June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Taukkyan Memorial
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ထောက်ကြံ့_စစ်သင်္ချိုင်း&oldid=658253" မှ ရယူရန်
၆ ဇွန် ၂၀၂၁၊ ၁၆:၂၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၆ ဇွန် ၂၀၂၁၊ ၁၆:၂၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။